Ny mpanjaka maraokanina dia nividy trano lehibe Paris $ 90 tapitrisa - relay teles
Ny mpanjaka maraokanina dia nividy trano lehibe Paris $ 90 tapitrisa
Ny King of Morocco dia voalaza fa nandany $ 94 tapitrisa (72 tapitrisa £) ho an'ny trano lehibe iray tao Paris renivohitra frantsay, novidiana mivantana tamin'ny tompony teo aloha, ny fianakavian'ny mpanjaka Saodiana.
Any akaikin'ny Tower Eiffel malaza, ilay trano dia manana efitrano fatoriana 12, dobo filomanosana, efitrano filalaovana, zaridaina manokana ary toeram-piantsonan'ny fiara tsy miankina iray.
King Mohammed VI dia iray amin'ireo mpanjaka manankarena indrindra manerantany, miaraka amin'ny tombam-bidiny manokana 10 heny noho ny an'ny mpanjakavavy anglisy Elizabeth II.
Ny fividianana azy dia tonga tamin'ny fotoana nihenan'ny 6% ny toekarena maraokana noho ny areti-mifindra voan'ny coronavirus.
Nanambara ny mpanjaka tamin'ny volana aogositra fa 120 miliara dirham (32 lavitrisa $; 25 miliara £) no halefa ao amin'ny toekarena ho setrin'izany.
Topazo maso i Kylie Jenner miseho amin'ny fivarotana pop-up ao amin'ny SF - Video
Manaraka an'i Neny ny zanaka vavy satria mpianatr'i Sierra Leone tsara indrindra